Induction Ukushisa Plate Yensimbi YOKWAKHA NOKWAKHA OKUSHESHAYO
Ikhaya / Izicelo / Ukushisa Ukushisa / Induction Heating Steel Plate YOKWAKHA
Isigaba: Ukushisa Ukushisa Tags: thenga i-heater plate induction heater, Ukushisa ukufakelwa, induction ukushisa steel plate, induction ipuleti lokushisa elenza, Ukwenziwa kwepuleti lensimbi, induction ipuleti lensimbi elenza, Imvamisa emaphakathi yakha ukushisa, MF ekwakheni ipuleti lensimbi, ipuleti yensimbi, ipuleti lensimbi elenza, Ukushisa ipuleti yensimbi, ipuleti lensimbi elenza ukushisa, amapuleti ensimbi UKWAKHA
I-metal induction yokushisa ipuleti yensimbi yokwakha futhi ukwakheka okushisayo izinhlelo ezinhle kakhulu zokushisa ukufakwa. Ezezimboni Ukwenziwa kwe-induction nokwakha okushisayo izinqubo zibandakanya ukugoba noma ukubumba i-billet yensimbi noma ukuqhakaza ngemuva kokuthi kufudunyezwe ezingeni lokushisa lapho ukumelana kwalo ne-deformation kubuthakathaka. Amabhulokhi wezinto ezingekho kwensimbi angasetshenziswa futhi.
Ukushisa imishini yokushisa noma izimpahla ezijwayelekile zisetshenziselwa inqubo yokuqala yokushisa. Amabhola angahanjiswa nge-inductor nge-pneumatic noma i-hydraulic pusher; i-pinch roller drive; umshayeli ogandaganda; noma ugongolo lokuhamba. Ama-pyrometers angaxhumani nawo asetshenziselwa ukukala izinga lokushisa le-billet.
Eminye imishini efana nemishini yokunyakaza yomshini, imishini yokugoba, nemishini yokuphrinta ye-hydraulic extrusion isetshenziselwa ukugoba noma ukubumba insimbi.
Injongo: Hlangisa ipuleti lensimbi (3.9 ”x 7.5” x 0.75 ”/ 100mm x 190mm x 19mm) ngaphambi kokwenza inhloko yekhanda ngenhloso yokukhulisa umkhiqizo uma kuqhathaniswa nokushisa ngomlilo wegesi.
Material: Ipuleti yensimbi
Ukushisa: I-2192 ºF (1200 ºC)
Ukuvama: 7 kHz
Izisetshenziswa Zokushisa Zokungenisa: I-DW-MF-125/100, 125 kW ukufakwa kokushisa uhlelo ifakwe isiteshi sokushisa esikude esiqukethe ama-capacitor amathathu we-26.8 μF.
- Isikhundla ezintathu, ikhoyili yama-helical eguquguqukayo eyenzelwe futhi yathuthukiswa ukukhiqiza ukushisa okudingekayo kwalolu hlelo lokusebenza.
Inqubo Ingcwecwe yensimbi yafakwa kuzindawo ezintathu zekhoyili yama-helical kanye namandla kagesi avulwa. Ngemizuzwana engama-37, kufakwe ipuleti lesibili lensimbi engagqwali, kwathi ngemizuzwana engama-75 kwafakwa ipuleti lesithathu lensimbi engagqwali. Ngemizuzwana eyi-115, izinga lokushisa elifunekayo litholakele ingxenye yokuqala, futhi inqubo yaqhubeka.
Ngemuva kokuqalisa, izingxenye zingafudunyezwa njalo ngemizuzwana engama-37 kusukela kulandelana ezifakiwe. Ngenkathi isikhathi esiphelele somjikelezo singu-115
imizuzwana, ingxenye ingasuswa njalo ngemizuzwana engama-37, evumele ukuthi kungeniswe ukuze kufinyelele izinga lokukhiqiza elifunekayo
futhi ubone ukuzuza okukhulu uma kuqhathaniswa nokusebenzisa isithando segesi.
Izinga lokukhiqiza eliphakeme: Le nqubo izuze izinga lokukhiqiza lezingxenye eziyi-100 ngehora, kanti isithando somlilo sikhiqiza izingxenye ezingama-83 ngehora
- Ukuphindeka: Le nqubo iyaphindwa futhi ingahlanganiswa nenqubo yokukhiqiza
- Precision kanye nekghono: Ukushisa kunembile futhi kusebenza kahle, ngokushisa kusetshenziswe kuphela kumacwecwe ensimbi
Izicelo Eziphelele Zokwenza Induction
Imishini yokushisa induction ijwayele ukusetshenziselwa ukushisa ama-billet wensimbi, imigoqo, amabhlokhi ethusi, ne-titanium block ekushiseni okufanele kokukhula nokwakha.
Izicelo Zokwakha Ngokwengxenye
Ukushisa induction kusetshenziselwa ukufudumeza izingxenye ezinjengeziphetho zamapayipi, iziphetho zama-axle, izingxenye zezimoto, nemigoqo yebha yokuqamba ngokwenqubo nezinqubo ezakhiwe.
I-Induction Heating Advantage
Uma kuqhathaniswa nokufakelwa okuvamile, imishini yokufudumeza yokungeniswa yokwenza inika inqubo nenzuzo enhle
Izikhathi ezifudumeza eziningi ezifushane, kunciphisa ukukalwa ne-oxidation
Ukulawulwa kokushisa okulula nokunembile. Izingxenye emazingeni okushisa angaphandle okucacisiwe zingatholwa futhi zisuswe
Akunasikhathi esilahlekile sokulinda isithando somlilo silinganisele ekushiseni okudingakalayo
I-Automated imishini yokushisa engenayo kudinga umsebenzi wezandla omncane
Ukushisa kungaqondiswa endaweni eyodwa, okubaluleke kakhulu ezingxenyeni ezinendawo eyodwa yokwakha.
Ukusebenza okuhle kakhulu kokushisa - ukushisa kwenziwa engxenyeni uqobo futhi akudingeki ukuthi kufudunyezwe egumbini elikhulu.
Izimo zokusebenza ezingcono. Ukuphela kokushisa okukhona emoyeni yilokho kwezingxenye ngokwazo. Izimo zokusebenza zimnandi kakhulu kunesithando sikaphethiloli.
Ukushisa Ukushisa Inner Steel Liners